भोलि ग्रहण लाग्ने, के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/भोलि ग्रहण लाग्ने, के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
भोलि ग्रहण लाग्ने, के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
काठमाडौं– भोलि बिहीबार पौष कृष्ण औँसीका दिन बिहान खण्डग्रास (आधा ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले बिहान ८:४२ मा स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण शुरु हुनेछ । बिहान १०:०१ बजे मध्य हुने ग्रहण ११:३१ बजे समाप्त हुनेछ । पूर्व र आग्नेय कोणको बीचबाट ग्रहण समाप्त हुने समितिले जनाएको छ ।
ब्रेकिङ समाचार : एसईई परीक्षा स्थगित
सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा पुरिएका ८ वर्षिय बालकसहित ११ जनाको शव भेटियो, बेपत्ताको उद्धार गरिदै
यिनै गल्तीका कारण काठमाडौ कोरोनाको उच्च जोखिम
श्रृंखला खतिवडाको घरमा पस्यो कोरोना, आमा आइसोलेसनमा